Bogga ugu weyn » posts » Wararka Diyaaradaha » Codsi Facebook ah oo uu siinayo Patriot dhab ah si loo badbaadiyo Air Seychelles
Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Wararka Diyaaradaha • Wararka garoonka • Jebinta Wararka Safarka • Arimaha Dowlada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Dad war samaynaya • Seychelles wararka safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Warka Safarka Safarka • News Trending
Codsi Facebook ah oo uu siinayo Patriot dhab ah si loo badbaadiyo Air Seychelles
Safarka Dalxiiska ee Seychelles wuxuu kaa doonayaa inaad la wadaagto farriintiisa facebook inta aad awooddo. Farriinta ayaa ah: Hawada Seychelles waa in aan la xirin.
Air Seychelles waa inaan la xirin, laakiin markaad booqato Websaydhka Air Seychelles oo aad raadiso duulimaad kasta oo marin caalami ah, jawaabta waxay noqon doontaa: “Duulimaadyo lama helin”
Air Seychelles waxay ahayd sharafka Jamhuuriyadda Seychelles. Waa shirkad diyaaradeed oo wanaagsan, laakiin sidoo kale sanadba sanadka ka dambeeya ayay khasaaraysay.
Wadada kaliya ee caalamiga ah ee macaashka laga helo waxay ahayd Seychelles ilaa Mauritius, ka sokoow duullimaadyada maxalliga ah, halkaasoo shirkadda duulimaadka qaranku ku laheyd kaligiis. Duulimaadyada gudaha waxaa laga yaabaa inay yihiin dhammaan wixii haray haddii shirkadda side ay badbaado.
Heshiisyada mushahar la'aanta aan macquul ahayn ee lala galayo kooxda maareynta sare ee shirkadaha duulimaadyada ee ay diyaarsatay Etihad Airways ayaa dhiigbaxaya shirkadda, qof aqoon leh ayaa u sheegay eTurboNews.
Xilligan, Air Seychelles waxaa lagu leeyahay lacag fara badan Shirkadda Xamuulka ee Imaaraadka, oo lagu daray kuwa haysta. Falanqeeyayaashu waxay rumeysan yihiin xitaa taageerada Dowladaha Seychelles, xitaa dowladda Seychelles ma sii wadi karin duulimaadkeeda qaran.
Mawduucani waa dooda ugu yar ee Seychelles, 3 bilood ka dib markii madaxweyne cusub loo doortay jasiiradda jasiiradda in ka yar 100,000 oo qof.
Duulimaadyada Air Seychelles waxaa xaqiiqo ah in maaraynta dhulka ay ugu qaalisan tahay gobolka keligiis
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Seychelles waxay ku jiraan halgan loogu jiro badbaado, kicin Seychelles Discovery TouWaxaan u dirayaa codsigan aan la saxeexin barteeda Facebook:
HA LOO XIRO HAWLAHA GUUD EE HAWADA
Meel dalxiis u gaar ah, sida kooxda kaliya ee jasiiradaha granitic ee adduunka ku yaal, sida meesha kaliya ee lowska ugu weyn uguna culus ee Cocodemer uu ka soo baxo waa deegaan dabiici ah, sida mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee adduunka, oo leh Xeebaha ugu quruxda badan adduunka, maadaama ay yihiin mid ka mid ah taariikhda deegaanka ugu da'da yar iyo mid ka mid ah qowmiyadaha ugu quruxda badan adduunka;
Waa inaan sidoo kale haynaa haybad lagu faani karo, aqoonsi ahaan Seychellois (e), haysashada Baasaboorkeenna oo ah kan ugu xooggan Afrika iyo waddammada 27-aad ee xorriyadda safarka adduunka ilaa 150 waddan iyo dhulal, iyadoo leh hawada ugu nadiifsan Afrika, midna leh badda ugu nadiifsan adduunka
iyo annaga AIRLINE AAD LEH OO QORAAL AH 100% SEYCHELLES.
Waa inaan ilaalinaa aqoonsigeena iyo diyaaraddeena mataleysa madaxbanaanideena iyo ismaamulkeena sida jamhuuriyad. Haa waxaa laga yaabaa inaan si wanaagsan u maamuli lahayn oo aan ugu sii dhiirrigelinno martida iyo dadkayaga deegaanka ah kuwaana waa qaar ka mid ah qodobbada;
1) Heerarka soo jiidashada iyo tartanka ka fiican shirkadaha kale ee duulimaadyada.
2) Duulimaadyo toos ah oo dheeri ah.
3) Qiimayaal degaan oo aad u jaban si loo soo jiito suuqa maxaliga ah.
4) In laguu oggolaado inaad u duusho dhammaan waddamada Imaaraadka oo ay ku jirto Dubai
5) Qiimayaashu waa inay soo jiitaan dhammaan dadka deegaanka si ay ugu adeegsadaan Air Seychelles dhammaan waddooyinka ay bixiso diyaaraddeennu ee aysan u raaci karin diyaaradaha kale. Waa inay qasab ku noqotaa in dadka maxalliga ahi ay isticmaalaan oo keliya Hawada Seychelles illaa ay ka buuxsamaan ama aan ahayn jidadkeennu.
6) Sii waxtarrada Seychelles kuwa duulimaadka la socda Air Seychelles, tusaale ahaan, xarun lagu nasto oo bilaash ah oo loogu talagalay qubeyska iyo boorsooyinka, gelitaanka bilaashka ah ee qaar ka mid ah jardiinooyinkeenna qaran ama khidmadaha laga soo dego jasiiradaha qaarkood, qiimo dhimista bisha malabka ah ee hoyga ama bisha malabka ee dheeriga ah sida shumaca casho fudud ama hadiyadaha arooska, qiimaha taksiyada qaaska ah, sicirka laga dhimay xogta internetka iyo waxyaabo kale.
7) Suuq geyn badan oo diyaaradeena ah oo ku saabsan boorarka iyo carwooyinka ganacsiga dalxiiska, xafiisyada tikidhada safarka.
8) Maalgashi diyaarado khaas ah oo loo leeyahay Air Seychelles oo ah taksi hawada ah oo loogu talagalay kooxaha shirarka, dadka caanka ah, diblomaasiyiinta, ganacsatada, duulimaadyada deg-degga ah iyo xitaa socdaalka gaarka ah ee doonaya inuu ka fogaado dadka badan. Waxay u shaqeyn kartaa sida markabka saliida, qasab maahan oo kaliya Seychelles.
9) Maalgashi badan ku samee maxaliga ah maaraynta iyo waaxyadeeda oo dhan. Dalxiis ku dheji barnaamijyada iskuulka laga soo bilaabo dugsiga hoose iyo wixii ka dambeeya. Bar dhallinyaradeenna qiimaha ay warshaddu leedahay oo u diyaari si ay ula jaanqaadaan wershadaha oo ceejis buuxa.
10) Seychelles mar kale ku faan
Waraaqo xarago leh, wakaaladu waxay soo dirtaa:
FADLAN TAAGEERA AIRLINE-KA IYO QIIMAHA JIRITAANKIISA. KA QAADO DUULKA AIRLYINKA KALE LAGA HELO LACAGTAADA DIIWAANGELYADA HAWLAHA HADDII AAD RABTID INAAD KU ARAGTID DULQAADO DHAMMAAN
FADLAN SHARE GELIGAN SI AAD UGU SAMAYSATO.